September 12, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (Laascaanood)-Allaha u naxariistee waxaa habeenimadii xalay ahayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu diley Xildhibaan Cabdirisaaq Cardoofe oo kamid ahaa Golaha deegaanka ee degmadaasi ee dhowaan la doortay.
AUN Xildhibaan Cabdirisaaq Cardaoofe oo siweyn looga yaqaaney magaalada Laascaanood ayaa la sheegay in dabley hubaysani ay ku dielen gudaha magaalada Laascaanod, iyadoona meydkiisa la geeyey Cisbitalka weyn ee magaaladaasi.
Kadib markii meydka marxuumka la geeyey goobta caafimaad ayaa waxaa isugu soo ururay boqolaal kamid ah bulshada kunool magaalada Laascaanood, waxaana halkaasi ka dhacay banaanbaxyo xilli habeenimo ah ay dhigeen dad ka soo horjeeda dilalka qorshaysan ee ka dhaca gudagaha magaalada Laascaanood.
Qaar kamid ah shacabka Laascaanood ayaa sheegay in beegsiga iyo dilalka hal-doorka gobolka Sool ay ku soo badanayaan magaaladaasi waxaana ay ugu baaqeen xukuumadda Muuse Biixi inay caddayso cidda ka dambaysa falalkaasi gurracan.
Waxa waajib ah in laga gungaadho qardoofooyinka iyo fadqalalada iyo dilalka qorsheysan dadka wada. Sida ugu wacan ee looga hortegi karaaana waa iyada oo shacabka iyo Dawlada wada dhaweyn buuxda yeeshaan. Dadkani sida waxashnimada ah wax u dilaya waxa la dhaweynaya oo qarinaya dad dagaalada degen. Kolkaas waxa ku waajibay dadyowgaas kula la jaarka ahi waa iney soo sheegaan Cidey ka shakiyaan. Magaalooyinka kale ee Somalilandba sidaas ayay ku bedbaadeen.
Ac. Dhamaan. C/risaaq Cardoofe, xildhibaanka la dilay waa ninkii ka shaqaynayay oo hurinayay wixii dagaal iyo iska horkeen ka jiray Boocame iyo Birtadheer.
Ninkii dadka walaalaha ah ee taagta daran, muslimka xilgaa adag kala fogaynayay isagana saacadii baa ku socotay, ilaahow u naxariiso. Ilaahow Soomaali xaqa tus oo quluubtoodana isku soo jeedi.
Inta dhimatay Allaha u naxariisto. Inta nool Ilaahay ha badbaadiyo.Ninkii dab shida asaga ayaa ku gubanaya ee dhibka, dilka iyo xumaan ka shaqaynta ha la iska dhaafo.
Marxuumka anigu hore uma maqal magiciisa. Geeridiisa kadib ayaan sawirkiisa ku arkay mediaha. Walle, qurux iyo haybad godka waa la galay. Soomaaliyey, ayaandaran! Kii soo baxa ama ishu qabato ayey iska dilaan.
Haddii uu maxas ka tagay, Allaah ha ugu beddelo cawil-celin.